Emashumini amabili eminyaka edlule, isiphanyeko sikabhanana asikaze sibe nobuchule obusha kunasemuva lapho uBruce ebeka ilungelo lobunikazi laphaya. Zonke iziphanyeko zikabhanana ezimakethe zinenhloso efanayo… ukwehlisa ukulinyazwa kukabhanana wakho. Ngamanye amagama, i- Inani lesiphanyeko asikashintshi. Kwenze ubhanana wakho uhlale amasonto ambalwa isikhathi eside eminyakeni engamashumi amabili eyedlule… futhi ubenza bahlale ngokufana nanamuhla.
Manje kungani abantu bezobakhokhela amanani ahlukile? Ngoba umthengi ngamunye unenani elibonakalayo elihlukile. Abanye abantu bangathanda ukuba lula kwe-hanger yebhanana engasebenzisi isikhala esiphikisayo, ngakho-ke bazokhokhela imodeli engaphansi kwekhawunta. Abanye bazokwazisa okunamathiselwe kwesitsha kwezinye izithelo. Abanye bazokhokha ngokususelwa ezintweni zokwakha kanye nethuba lokuthi lizobukeka lihle emakhaya abo. Futhi… noma kunjalo, abanye bazokhokha u- $ 384.23 ukuxhasa imikhiqizo esimeme kanye nengcweti yendawo eyenziwe ucezu lobuciko ekhishini lakho.
Eqinisweni, sisebenza endaweni yesikhulumi sebhizinisi lapho abadlali ababalulekile basebenza kanzima ukuthola nokuhlanganisa imikhiqizo nezici ezintsha, ukuthi izici zabo eziyinhloko zisemuva embonini. Bagxile ekwakheni into enkulu elandelayo ukushayela ukuthengisa, ngenkathi amakhasimende abo ebashiyela izixazululo ezingcono, kaningi kunalezo, ezingabizi kakhulu.
Umehluko ekutheni abantu bathenga i-banana hanger eyodwa noma enye e-Amazon awuhlangene yini nobhanana wokuhlala uhlanzekile futhi ungavuthiwe… bonke bayakwenza lokho. Umehluko usezilinganisweni, izibuyekezo, izincazelo, nokwakhiwa kwemikhiqizo. Njengomakethi, kulapho okufanele usebenzise khona isikhathi sakho - ngempumelelo marketing imikhiqizo yakho nezinsizakalo… izilinganiso, izibuyekezo, incazelo, nokwakhiwa kwemikhiqizo yakho nezinsizakalo.
Emphakathini wokumaketha kwidijithali, sinomkhuba omubi wokuhlala njalo sifuna ipulatifomu yesiteshi senhlamvu noma isiteshi esizolungisa zonke izinkinga zethu. Kepha ezinye zezinkampani zobuchwepheshe ezinenzuzo enkulu nezikhulayo azizange zisungule nhlobo. Bavele babona ukufuneka futhi bathuthukisa indlela engcono kakhulu yokumaketha ukuthi babeyisixazululo esihle kakhulu senani elihle kakhulu.
Abathengi namabhizinisi ngokufanayo banezinkinga ababhekene nazo nsuku zonke ezivele zifuna isisombululo. Noma ngabe kulenga ubhanana wabo, noma kuzenzela ukubhala kwabo, ukuklama, ukugunyaza, kanye nenqubo yokushicilela yencwajana yabo elandelayo. Inkinga ikhona, ukukhungatheka kwabo kukhona, futhi sebevele bayakuqonda ukubaluleka kwesisombululo.
Awudingi esinye isici, ukwenziwa okusha okulandelayo, noma iphoyinti lentengo elehlukile uma isidingo sikhona futhi inani liyaziwa. Gxilisa ukunaka kwakho enkingeni eyinhloko imikhiqizo yakho nezixazululo ezikunikeza isisombululo.
Iseluleko sethu bekungukuthi, esikhundleni salokho, sitshale imali ocwaningweni nasekwenzeni uphawu, bese sisebenzisa isisombululo esilula, esisheshini ngeplatifomu yezentengiso edidiyelwe lapho singagxila khona ekukhuliseni ukuqwashisa nasekuthengiseni ngemikhiqizo yabo. Babevele badinga i-ol 'banana hanger ejwayelekile ... akukho okunye.
Njengoba ubheke ebhizinisini lakho, ukukhomba amaphuzu obuhlungu ngaphakathi kwenhlangano yakho lapho ubuchwepheshe bungakusiza ukuthi uphumelele futhi usebenze kahle kakhulu kungahle kungadingi isisombululo esibizayo noma esisha. Kungaba ngokoqobo ipulatifomu yesoftware ekhipha, iguqule futhi ilayishe idatha ekulondolozela amahora amaningi womunye umsebenzi phansi komgwaqo.
Yenza ukuhlaziywa okufanayo namakhasimende akho… kuphi ukukhathazeka nezikhala zabo ekutheni ukwazi kanjani ukubasiza futhi ubagcine bejabule?